" နိုင်ငံတော် " နှင့် " နိုင်ငံသား " - ဘယ်ဒင်း က ပင်ရင်းမူလ
Photo credit - Naymyowai
အောက်တိုဘာ ၂ - ၂၀၁၂
ယခုတိုင်အပြင်းအထန်ဆက်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သွေးထိုးလှုံ့ ဆော်မှုတွေရှိနေတယ်ဟူသော
ဤဒေသများတွင်ဒေသခံများက၄င်း၊လယ်သမားများက၄င်းအရေးဆိုသောအခါသူတို့ သဘောတူလို့ ရောင်းထားပြီးသားဟူသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်၎င်း၊နိုင်ငံတော်ကလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်ဟူသော
မြန်မာလူမျိုးခေတ်ပြောင်းရေးသမားများ(reformers) အားလည်းသံသယရှိသွားကြလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဟူသည်ကိုဆက်ရေးရင်းရှင်းပြသွားပါမည်။
တစ် - သူတို့ ကိုယ်တိုင်က(မူလပိုင်ရှင်များက)သဘောတူလို့ ရောင်းထားပြီးသားဖြစ်သည်
ဟူသောအကြောင်းပြချက် - -
နှစ် - နိုင်ငံတော်ကလုပ်ကိုင်မည်။ နိုင်ငံတော်သည်မည်သူတစ်ဦးချင်းကိုမျှ
“စာမတတ်သောကျနော်တို့ ကိုစာတတ်သောမိဘပြည်သူတွေကကူညီကြပါ” ဟူသောဆန္ဒပြလယ်သမားများ၏တောင်းပန်ခယမှုမျိုးသည်လူသားအသည်း နှလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ကာလူတန်းစားအမြင်လည်းရှိသောသူတိုင်း၏ရင်ကိုလှုပ်ခါစေသည်။
သဘောတူညီချက်သည် Fraud ဖြစ်သည်။ သဘောတူညီချက်မမြောက်ပေ (null and void)။
ထို့ အတူအတင်းအကြပ်ကိုင်၍ (coersion) ရယူထားသောသဘောတူညီချက်
မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေကာမူအကြောင်းပြချက် ၂ခုအနက် ပထမအကြောင်းပြချက်သည်
အကြောင်းချင်းရာ(argument based on factual accuracy) အပေါ်အခြေခံသည်။
အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်သော်လည်းအပင်ပမ်းခံ၍ပြင်လျှင် - တိုက်ယူလျှင် - ရနိုင်သည်။
သည့်ဒုတိယအမျိုးအစားအကြောင်းပြချက် (an argument based on an ideology
of the bygone era) လောက်တော့အန္တရယ်မကြီးဟုဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။
ကန့် ကွက်နေသူဒေသခံတောင်သူများဘက်ကသာလက်လျှော့၍နောက်ဆုပ်ပေးရမည်။အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်နိုင်ငံသားများသည်နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားကိုမဆန့် ကျင်နိုင်။
အနစ်နာခံကြရမည်ဟုဆိုလိုရင်းဖြစ်နေသည်။ ထို့ ကြောင့်စကားအရချိုသာပြေပြစ်
အကျိုးစီးပွားဖြစ်နေတယ်။ကျုပ်တို့ ဘက်ကမလျှော့နိုင်ဘူး၊ခင်ဗျားတို့ ဘက်
နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများထိပ်တိုက်တွေ့ လျှင်နိုင်ငံသားဘက်ကစွန့် လွှတ်
" တစ်ကိုယ်တော်ပုဂ္ဂလိကဘ၀ (ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်) ဆိုတာ ရပ်ရှားမှာမရှိတော့ဘူး" -
ှု"Individual life in Russia is dead" ဟု ဘောရစ်(စ်)ပါစတာနပ် ၏ ဒေါက်တာဇီးဗားဂိုး
ဇာတ်ကောင်ကသူ့ ဇနီးဟောင်းနှင့်ညိနေသောတော်လှန်ရေးကိုအစပိုင်း၌ထောက်ခံကူညီ ခဲ့သော်လည်းနောက်ပိုင်း၌စိတ်ပျက်လာသူဆရာဝန်ကဗျာဆရာဒေါက်တာဇီးဗာဂိုးကိုပြောခဲ့သည်။
(defined asaclass society, the state is comprised of classes.) ထိုခေတ်တွင်နိုင်ငံသား တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့်မိမိသည်ဘယ်လူတန်းစားဝင်ဖြစ်သည်ဆိုသည့်အချက်ကသာအရေးကြီး၍
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့်မူ - ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များမှအပ -လုံးဝအရေးမကြီးပေ။
ထို့ ကြောင့်ထိုခေတ်ကနိုင်ငံတော်နှင့် လူတန်းစားတို့ သည်သာအရေးပါကြ၍တစ်ဦးချင်း
လူပုဂ္ဂိုလ်(private individual) သည်သာမညဖြစ်ကာနိုင်ငံတော်၏အလိုဆန္ဒနှင့်အကျိုးစီပွား
ထိုကြောင့် နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံတော်တို့ ဆက်ဆံရေးသည်တိုက်ရိုက်ဖြစ်လာကာ၊
(Each citizen or the citizenry asawhole has the primacy in relation with the state.)
(individualism) ဖြစ်သည်။ အခြားသောအဓိကအုပ်မြစ်တစ်ခုမှာလွပ်လပ်ခွင့်များ
(freedoms) ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့်နိုင်ငံတော်သည်ပုဂ္ဂလိကလွပ်လပ်ခွင့်များကိုမထိပါးနိုင်ပေ။
(individual rights, property rights) များလည်းပါဝင်သည်။
အသက်အပါအ၀င်ကိုယ်ကျိုးများစွန့် ထားသောပုဂ္ဂိုလ်များရှိသည်။ ထိုသူတို့ မှာ
စစ်သည်တော်များ၊ သူလျှိုများ၊ ရဲအမှုထမ်းများ၊မီးသတ်သမား များစသည်တို့ ဖြစ်သည်။
ဆရာမာတင်စမစ် (Martin Smith) က "ဓါးစာခံပေါင်းသန်းလေးဆယ်"
(Forty Million Hostages) ဟူသောအမည်ဖြင့် Documentary တစ်ခုရိုက်ကူးဖြန့် ဝေခဲ့ဘူးသည်။
အကျိုးစီးပွားအလို့ ငှာအိမ်သားတစ်ဦးဦးကိုသော်၎င်း၊ အိမ်သားအများကိုသော်၎င်း၊
အယူအဆမျိုးဒီမိုကရေစီလူ့ အဖွဲ့ အစည်းတွင်မကျင့်သုံးတော့ပေ။
ရှုပ်ထွေးမှု(ideological confusion) ကိုကျော်လွှားနိုင်ကြရမည်။
ရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးပြီးနောက်သူမတို့ အား - ဤကြေးနီတူးဖေါ်ရေးသည် နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားရေးဖြစ်နေ၍နောက်ဆုပ်ပေးရန်အတိအလင်းမဟုတ်
သူတို့ အားပြည်ပမှဝေဘန်သူတစ်ဦးက Facebook တွင် ‘ခွပ်ဒေါင်း’ တွေလား
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် - ဒါဖြင့်နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားဆိုတာမရှိရတော့ဘူးလား
ဟုမေးစရာရှိပါသည်။ ဤသို့ မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတော်၏ရှေ့ ဆောင်မှုတစ်ခု
Zoning Advisory တစ်ခုအားဖြင့်ကြော်ငြာ၍အများပြည်သူဆန္ဒနှင့်အကြံပြု
ချက်များကိုရယူသည်။ ထို့ နောက် Town hall meeting တစ်ခုကျင်းပ၍ချပြ
စကားတွေအများကြီးပြောရသည့်အချက်ကိုတော့မရှောင်လွှဲနိုင်။ သို့ သော်တစ်ဦးချင်း
တထစ်ချမပြောနိုင်ပေ။ ပါတနာတစ်ဦးဖြစ်သောမြန်မာကုပ္မဏီ “ဦးပိုင်”သည်ပင်စင်စား စစ်တပ်အရာရှိကြီးများအဓိကအားဖြင့်စုပေါင်းပိုင်ဆိုင်သောကုပ္မဏီတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
မဟာဗျူဟာမြောက်အမာထည်များ (strategically important hardwares)
လက်ဝယ်ရှိထားရေးတွင် supply sources diversification သည်အရေးကြီးပါသည်။
ပြည်သူတို့ “အထင်လွဲခံရမည့်အချက်ကိုသတိမလွတ်သင့်။ သို့ ဖြစ်သောကြောင့်
မျိုးကိုရယူနိုင်လိမ့်မည်။ ဘာဆိုင်လို့ လဲဟူသောအတွေးဖြင့်တွန့် ဆုတ်နေစရာမလို။
စစ်ဗိုလ်တွေကစာရေး၊ စာရေးဆရာ(မ)တွေက NGO လုပ်စသည်ဖြင့် ကိုယ်ထင်ရာမြင်ရာလုပ်နေကြသောခေတ်ဖြစ်သည်။
အရပ်သားလေသံဖြင့်ရှင်းရှင်းပြောရလျှင်စစ်ဗိုလ်ဟောင်းဦးသိန်းစိန် - ဦးရွှေမန်းတို့ နည်းတူ
Posted by Myint Shwe at 11:43 AM0comments
" နိုင်ငံတော် " နှင့် " နိုင်ငံသား " - ဘယ်...